बसभित्रै ढुं’गाले हि’र्काएर स,हचालकको ह’त्या! – tshorolpa
Home/मुख्य समाचार/बसभित्रै ढुं’गाले हि’र्काएर स,हचालकको ह’त्या!
बसभित्रै ढुं’गाले हि’र्काएर स,हचालकको ह’त्या!
News १६ भाद्र २०७८, बुधबार १७:११
काठमाडौंको स्यु’चाटारमा रोकेर राखेको बसभित्र सह–चालकको ह’त्या गरेर भागेको आ’रोपमा प्रहरीले एकजना किशोरलाई प’क्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोरखाको सिरानचोक गाउँपा’लिका–६ घर भएका १८ व’र्षीय सुरेश’ प’रियार छन्।
२०७८ सा’उन २८ मा साँझ सा’ढे ६ बजे रो’किराखेको बा४ख ४२१ नम्ब’रको बसमा १९ वर्षीय रमेश खत्रीको ह’त्या गरिएको थियो’।
मृ’तक चक्रपथ परिक्रमा गर्ने सोही बसका सहचालक हुन्। ह’त्या आ’रोपीलाई महानगरीय अ’पराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी वृत कालिमाटीबाट खटिएको टोलीले पोखराकाे बसपार्कबाट प”क्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको हो।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा घर भएका खत्रीलाई सुरेशले ढुं’गाले हि’र्काएर ह’त्या ग’रेको महानगरीय प्र’हरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी रमेश बस्नेतले बताए।
ज्याकेट भित्र ढुं’गा बेरेर हि’र्काएर उनले ह’त्या गरेका थिए। त्यसपछि मृ’तकको कपडा र मोवाइल बोकेर उनि फ’रार भएका थिए। उ’नलाई ज्या’न मा’रा सम्बन्धि क’सुरमा म्याद लिएर म’हानगरीय प्रह’री वृत कालिमाटीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
राजधानीकाे सातदाेबाटाेमै यस्तो बिजोक
३० असार २०७७, मंगलवार १४:००